Azo atao ve ny manao piraty rindrambaiko maimaimpoana? | Avy amin'ny Linux
Azo atao ve ny manao piraty rindrambaiko maimaimpoana?
diazepan | | GNU / Linux
Ity lahatsoratra ity dia natokana ho an'i Gianfranco Ureta tamin'ny famerenany ahy fahafinaretana meloka izay mbola tsy tsapako hatramin'ny fotoana farany nampiasako ny Windows tamin'ny masiniko, na dia tsapako tamin'ny fomba hafa aza izany. Fahafinaretana asehoko anao amin'ity Imagen.
Andao hiantsoantso ho velona sy tontolo fahatelo fa isika dia: HITIAVITRA IZAHAY FA TSY mila mandoa vola alohan'ny hampiasana SOFTWARE. Raha misy fomba tsy ofisialy ahafahana miditra amin'ny rindrambaiko feno (tsy misy fampiasa tsy hita) maimaimpoana (na amin'ny vidiny ambany indrindra amin'ny tranga ratsy indrindra), dia tianay ny manararaotra azy. Amin'ny Internet dia azo alaina amin'ny Windows 8 feno fanafody izy io mba hanafoanana ilay Wat na ny serial ho an'ny programa freeware izay miaraka amin'ny habaka habaka dia azo itarina amin'ny zavatra tsara kokoa. Ary izany rehetra izany maimaim-poana. EFA ity bilaogy ity niatrika imbetsaka ny toe-javatra misy ny piraty ary ny maha-zava-dehibe ny fampiroboroboana rindrambaiko maimaim-poana ho fomba iray hiadiana amin'izany. Saingy tsy maintsy manontany tena isika …… Mety hosamborina ve ny rindrambaiko maimaimpoana?
Valiny fohy: ENY.
Valiny lava: Miankina amin'ny fahazoan-dàlana. Piraty raha mieritreritra momba izany ianao, dia manondro mandika ny fahazoan-dàlana. Isika rehetra dia mampifandray azy amin'ny fakana tahaka, fizarana, fisintomana, fivarotana indray, sns. fa izany dia satria voafetra ny fahazoan-dàlana nampiasaina. Raha maimaim-poana ny rindrambaiko, ireo zavatra rehetra ireo dia ara-dalàna tanteraka ary noho izany dia tsy misy dikany ny iantsoana azy ireo ho piraty. Ka mandeha amin'ny làlana hafa ny rindrambaiko maimaimpoana piraty, mitranga izany amin'ny tsy fanajana ny fahazoan-dàlana. Ohatra iray: fantatsika rehetra ny GPL ary fantatsika izay tsy azo atao (mamorona fork tompony, ampiasao ny tranombokiny amin'ny programa manana, arotsaho amin'ny milina arovan'ny DRM, sns). Ireo zavatra rehetra ireo piraty ho an'ny GPL izy ireo.
Ny ohatra miharihary indrindra? Rxart Desktop. Ny distro voalohany 100% tsy miankina an'ny GNU / Linux. Stallman dia hanokana ny ompa ratsy indrindra nataony ho an'i PixartArgentina noho ny nisamborana an'i Debian, nameno izany tamina programa manana sy aza mamoaka kaody na antontan-taratasy. Tsy dia ratsy loatra i Ubuntu satria farafaharatsiny mamoaka ny kaody ……. Na farafaharatsiny izany no lazain'izy ireo amintsika.
Saingy tsy ny tranga tena izy ihany, nisy fanandramana fanolanana. Tamin'ny 2007, ny fitoriana voalohany momba ny fanitsakitsahana ny GPL dia natao rehefa fantatra fa i Busybox dia nampiasaina tamin'ny firmware ho an'ny fitaovana natsofoka. Ny Monsoon Multimedia dia tsy maintsy namoaka ny kaody nampiasain'izy ireo ary nandoa onitra.
Fa toy ny nolazaiko teo aloha dia miankina amin'ny fahazoan-dàlana. Arakaraka ny maha-akaiky ny fahazoan-dàlana mankany amin'ny sehatra ho an'ny daholobe, no vao mainka sarotra ny manitsakitsaka. Ny MIT sy ny fehezan-teny roa BSD dia azo ihodivirana raha tsy ampidirina ao anaty lozisialy ny kopian'ny fahazoan-dàlana, izany hoe amin'ny fanaovana azy ho sehatra ho an'ny daholobe (tsy misy hadalana na toetra ratsy). Ny fahazoan-dàlana tsy azo ihodivirana irery dia ny "Ataovy izay fahazoan-dàlana tadiavin'ny besinimaro anao", izay ny hany lahatsoratr'izy ireo dia manao hoe "Ataovy fotsiny izay tadiavinao izay tadiavinao", ary ao anatin'izany ny tsy fanaovana na inona na inona.
Ary eto dia mifarana ny dissertation-ko momba ny piraty sy rindrambaiko maimaimpoana. Manantena aho fa tianao izany. Nanomboka nanao fombafomba hahazoana karatra debit iraisam-pirenena aho, amin'izay afaka mampiasa PayPal ary farany hiara-hiasa tsy amin'ity tranokala ity ihany fa miaraka amin'ireo tetikasa maro mahaliana ahy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Azo atao ve ny manao piraty rindrambaiko maimaimpoana?
33 hevitra, avelao ny anao
Ary inona no ifandraisan'ny Sublime Text amin'ny rindrambaiko MAIMAIMPOANA? Raha tsiahivina, manana kinova maimaimpoana io programa io, saingy tsy maimaim-poana.
Mikasika ny piraty ity lahatsoratra ity ary saika momba ny rindrambaiko manan-tompo toa ny Sublime Text hatrany.
Sublime Text dia tena nanware, freeware fa isaky ny roa isaky ny telo manelingelina anao mangataka anao hividy ny kinova feno. Toy ny WinRAR, WinZIP ary antivirus sasany.
Heveriko fa tsy ratsy ny mividy ny fahazoan-dàlana ho an'ny Sublime Text 2 hampiasa azy amin'ny Fenony, hijerena izany ho fanomezana fotsiny fa tsy toy ny fividianana fahazoan-dàlana, satria mendrika izany ny editera kaody noho ny tombotsoany sy ny toetra mampiavaka azy.
Mieritreritra aho fa hianatra hampiasa GNU Emacs ianao. Io no zavatra mahafinaritra indrindra hitako hatreto.
RoorQ dia hoy izy:
Amin'ny Linux dia mora kokoa ny mijirika kokoa noho ny an'ny Windows mihitsy, ohatra iray amin'izany ny soratra ambony dia vaky amin'ny baiko tsotra izay miova ny soatoavina hexadecimal, tadidiko fa hitako tao amin'ny forum piraty izany.
Valiny amin'ny RoorQ
joakoej dia hoy izy:
Eny, nieritreritra an'izany ihany koa aho, saingy toa tsy hacking izany, satria, na dia tsy mazava aza ny fomba nampiasanao mba hahazoana rindranasa, izay naloa maimaimpoana, maimaimpoana dia rindrambaiko maimaimpoana io ary tsy afaka milaza aminao na inona na inona izy ireo. ho fananany, satria ny kaody loharanom-pahalalana dia azon'ny olona atao rehetra ary manao izay tiany atao amin'izany, afa-tsy izay lazain'ny paositra, izany hoe, avadiho ho kaody fananana. Noho izany, tsy dia manambola loatra ny fandoavana fangatahana maimaimpoana fa kosa programa marobe no miaina amin'ny fanomezana sy vondrom-piarahamonina.
Mamaly an'i joakoej
BlackSabbath1990 dia hoy izy:
Valiny amin'ny BlackSabbat1990
Ny MikroTik Router OS dia rindrambaiko tompona vita amin'ny GNU / Linux ihany koa.
lovelltux dia hoy izy:
Tena marina izany, misy tranga izay heno fa ny ampahan'ny kaody rindrambaiko tompona sasany dia manana kaody maimaimpoana, saingy satria nakatona ny kaody, dia tsy afaka natao ny fanaovana kaonty ka tsy mazava intsony. Saingy voalaza fa na MS Pirates Free Software aza.
Mamaly amin'ny lovelltux
Mampiasà lisansa BSD novaina ary ho sarotra kokoa amin'izy ireo ny mandroba ny rindrambaiko, mila mitandrina ianao sao mametraka kopian'ny fahazoan-dàlana xD
Ohatra iray azonao atao ny mitanisa azafady?
Lahatsoratra tena tsara. Fa antsipiriany kely izay bebe kokoa momba ny fanoratana: Tsy miteny ianao hoe "nisy", hoy ianao hoe "nisy." Ity lesoka ity dia indroa misesy ao amin'ilay lahatsoratra. Tsy misy dikany amiko amin'ny Internet intsony ny accents, fa ny verbe "haber" dia mendrika ny hajako hatrany.
Raha ny marina raha misy accents, ary tokony hanitsy xD i Diazepan
Vao hitako fa mitondra an'i Rxart ireo OLPC Arzantina.
Ny FAO rehetra.
Ka ... Ny rindrambaiko maimaimpoana dia tsy maimaim-poana
Tsy hoe tsy maimaimpoana loatra ny rindrambaiko maimaim-poana, fa ny rindrambaiko maimaimpoana maimaimpoana dia manome anao tombony amin'ny fanovana azy amin'ny kaody loharano. Raha tsy mamoaka ny fanovana nataonao amin'ny kaody loharano ianao, dia mifanohitra amin'ny fehezan-dalàna amin'ny GNU General Public Licence (GPL).
Fa raha tsy tianao izany fahazoan-dàlana izany dia ampiasao ny lisansa BSD na Apache, izay samy mamela anao hitahiry ny zo tsy hamoaka ny fanovana / forkso amin'ny kaody loharano, amin'izay mamela anao hanao fork proprietary.
Pitecantropus Ovale dia hoy izy:
Raha misy lisansa tsy mamela anao hanidy ny kaody dia tsy afaka 100% izany lisansa izany. Izay no atao hoe namana fahalalahana. Ny zavatra mampalahelo dia tsy misy mahalala ny tena atao hoe Freedom.
"Tsy tiako ny paradisa izay tsy anananareo zahana mankafy afobe"
Mamaly an'i Pitecantropus Ovale
Tsia. Ny fahalalahana hanidy ny kaody dia tsy tafiditra ao amin'ny fahalalahana 4 an'ny rindrambaiko maimaimpoana, ary koa ny fandrarana hanidiana ny kaody.
Miombon-kevitra aminao aho, na dia efa nampiady hevitra aza io teboka farany io taorian'ny nipoiran'ny GPL (na dia misy ihany aza ny kinova mandefitra kokoa, saingy tsy manery anao hitazona ny kaodim-loharano hivoha)
Gambi dia hoy izy:
Tena blowjob no nolazainao ... toy ny miteny hoe:
"Raha tsy manana fahalalahana mamono olona hafa aho dia tsy misy fahalalahana tanteraka."
Valiny amin'i Gambi
Marina ny voalazany, nosokafako kely ny saiko
Raha mijery azy io amin'ny fomba fijerinao dia manana ny marina ianao. Raha ny tena izy, amin'ny fampiharana dia afaka manao izay tianao ianao ary manenjika azy araka ny lazain'ny lahatsoratra. Eo ny vokany ary afaka manao izay tianao ianao. Saingy tsy maimaimpoana 100% amin'ny teôria ilay kaody, noho io antony io ihany dia tsy manome anao fahalalahana hamono olona hafa ny lalàna ao amin'ny fanjakana eto amin'izao tontolo izao araka ny nolazain'ny mpiara-miasa aminao. Tsotra ny hoe misy zavatra manana fahazoan-dàlana, na lalàna madio misy mba hanaisotra ny fahalalahan'ireo izay tsy mahay mijery ny hafa, satria ny fahalalahana dia hery lehibe izay misy andraikitra lehibe, ary ny tsirairay dia tsy ampy tompon'andraikitra amin'ny manaja ny hafa.
Tapitra ny fahafahanao manomboka eo amin'ny fiandohan'ny an'ny hafa, aza hadino izany.
Andriamanitra ô, mandeha indray ity: facepalm:
Maimaimpoana amin'ny lafiny iray ihany izy io, amin'ny heviny fa mifanohitra amin'ny rindrambaiko tompona sy ny zavatra rehetra misy ifandraisany amin'izany i Stallman. Noho izany, tsy safidy malalaka io fa maimaim-poana, raha mbola tsy te hanao rindrambaiko tompony miaraka aminy sy zavatra hafa ianao.
Rodrigo Prieto dia hoy izy:
Soa ihany fa tsy izao, tonga miaraka amin'i Huayra izy ireo (mifototra amin'ny debian) http://www.comunidadhuayra.com.ar/
Mamaly an'i Rodrigo Prieto
Ka mandika fahazoan-dàlana ve dia piraty? Ka inona ary? maka tahaka ny enti-mody momba ny heloka bevava?
Raha misy sazy any an-tsekoly amin'ny fakana tahaka ny enti-mody dia mazava ho azy fa asa manokana ny enti-mody.
Tsara ny lahatsoratrao diazepan!
Fleet dia hoy izy:
Ny hacking dia toy ny fihinanana fantsona, manomboka amin'ny iray ianao ary aza mijanona intsony;).
Aleo tsy manao hack, mazava ho azy fa tsy misy. Izay tia ny Sublime Text dia tokony hividy azy io, fa ny olona nandahatra azy io dia manana ny zony eto amin'izao tontolo izao mihinana amin'ny asany. Ary raha tsy manam-bola ianao dia manana safidy hafa maimaim-poana, na amin'ny Linux na Windows ...
Raha fintinina, ny fanapahana ho an'ny fampiasana manokana dia tsy misy fialan-tsiny ary ny fanapahana ho an'ny fampiasana matihanina dia tsy azo avela.
Valiny tamin'i Filo
Tsy nandoa na inona na inona mihitsy aho, afa-tsy ny lalao piraty sy sarimihetsika marobe, oh ary talohan'ny nanofanako sarimihetsika blockbuster, izay ara-dalàna, fa ny sisa amin'ilay rindrambaiko dia tsy, maimaimpoana ary zavatra maro no vaky na miaraka amina serial mahazatra, indrindra fa ny lalao windows, antivirus ary programa hafa
"MANAO NY FITIAVANA INDRINDRA AZONAO"
Raha tsy manao izay tadiavinao ianao dia handika ny fahazoan-dàlana ve? 😉
"Fantatsika rehetra ny GPL ary fantatsika izay tsy azo atao [ohatra] mampiasa ny tranombokiny amin'ny programa manana"
Milaza izany ny FSF, saingy tsy mazava tanteraka izany: https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#Linking_and_derived_works
Satria efa nahatratra ny vola ilaina tamin'ny taona 2013/2014 i Linux
"Plugin Registry", fonosana plugin ho an'ny GIMP 2.8